အကောင်းဆုံး ကြေးနီအမြစ်ဖယ်ရှားရေး အစက်ချတိပ် ထုတ်လုပ်သူနှင့် စက်ရုံ |DAYU
ကြေးနီအမြစ်ကို အစက်ချတိပ်ဖြင့် ဖယ်ရှားခြင်း။
MOQ: 1 လိပ်
ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုပမာဏ- တစ်လလျှင် မီတာ ၂.၁ ဘီလီယံ
မူလနေရာ: တီယန်ကျင်း၊ တရုတ်
ထုတ်ကုန် ID : SD1618203ST
အထူ (mm) : 0.18mm၊ 0.2mm
Dripper Spacing (mm) : 200 300 500mm
Dripper Flow[0.50]နှုန်း (L/h)：1.8L/h 2.4L/h 3L/h
Filtration: 120 mesh 120
သင့်တော်သော သီးနှံပင်များ၊ အမြစ်တိမ်သော သီးနှံများ၊ အရွက်များ ပေါက်သော သီးနှံများအတွက် သင့်တော်သည်။
Package : (300-500m/roll)
အလိပ်အရှည် 1000/roll၊2000m/roll၊2500m/roll၊3000m/roll သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်
ကုန်ကြမ်း : PE
ဘေးတိုက်အလျား: 48-78 မီတာ
1.ရေစက်ကို တစ်ကြိမ်တည်း ပုံသွင်းပါ။
2. ၎င်း၏ filtering window ပါရှိသော dripper တွင် ကျယ်ပြန့်ပြီး ရှည်လျားသော လမ်းကြောင်းအသစ်ပါရှိသည်။
3. အဆိုပါ dripper တွင် filtering အတွက် ကျယ်ဝန်းသော ဧရိယာ နှင့် flow channal အပိုင်း၏ ကျယ်ပြန့်သော အရွယ်အစား ရှိသည် ၊ ထို့ကြောင့် blocking resistance သည် အားကောင်းပါသည်။
4. ရေစီးကြောင်းသည် တရကြမ်းစီးဆင်းနေပြီး ပျမ်းမျှရေယိုစိမ့်မှုအဆင့်မှာ 5% အောက်သာရှိသည်။
5. အဆိုပါရေစက်ကို ပိုက်အတွင်းတွင် တိုက်ရိုက်ဂဟေဆော်ထားသောကြောင့် ဖိအားကျမှု အနည်းငယ်ရှိပြီး ဆည်မြောင်းတိကျမှု မြင့်မားသည်။
6. သိမ်းဆည်းထားသောရေပမာဏသည် 30-40% ရှိပြီး သမားရိုးကျ ဆည်မြောင်းမုဒ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
1. မတူညီသော နံရံအထူများသည် အသုံးပြုရန် မတူညီသော အသက်အရွယ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
2. မတူညီသော flowrates နှင့် dripper ကြားကာလများသည် သီးနှံများ၏ မတူညီသော ရေလိုအပ်ချက်ပမာဏအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
3. ၎င်းသည်တပ်ဆင်ရန်၊ သယ်ယူရန်နှင့်အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေသည်။
အလုပ်ဖိအား: 40 ~ 120kpa
သင့်လျော်သော နယ်ပယ်-လယ်ကွင်းသီးနှံများ၊ ဖန်လုံအိမ်ကြီးများ၊ သီးပင်များ၊ စပျစ်သီးနှံများ အတန်းလိုက်ကြဲသည်။
Subsurface Drip Irrigation ကို ဘာကြောင့် သုံးတာလဲ။
ပိုမိုထိရောက်သောရေအသုံးပြုမှု၊ SDI သည် ရေငွေ့ပျံခြင်းနှင့် နက်ရှိုင်းစွာ စိမ့်ဝင်မှုလျော့နည်းသွားခြင်းဖြင့် ရေကို သက်သာစေပါသည်။
မြေအောက်ရေညစ်ညမ်းမှု လျော့နည်းလာခြင်း၊ SDI သည် ဆည်မြောင်းများ ကျော်လွန်၍ သယ်ဆောင်သွားသော အာဟာရဓာတ်များ စိမ့်ဝင်မှုကို လျော့နည်းစေပြီး တူညီမှု အားနည်းခြင်း၊
SDI သည် အပင်အမြစ်များဆီသို့ ရေနှင့် အာဟာရများကို တိကျသောအချိန်နှင့် လိုအပ်သော ပမာဏအလိုက် တိုက်ရိုက်ပေးပို့သည့် အထိရောက်ဆုံး စီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ဆည်ရေသောက်ဧကများကို အများဆုံးချဲ့ထွင်ပြီး SDI သည် လယ်ကွင်းများကို ထောင့်မှထောင့်သို့ ရေသွင်းကာ သေးငယ်ပြီး ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော ပါဆယ်ထုပ်များကို အလွယ်တကူ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်သည်
အပင်အာဟာရကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး ဆည်မြောင်းရေမှ သယ်ဆောင်လာသော အာဟာရဓာတ်များကို အပင်အမြစ်များထံ တိုက်ရိုက်သက်ရောက်သည်။
ပေါင်းပင်ကြီးထွားမှုကို လျှော့ချပေးသည်၊ SDI ဆည်မြောင်းသည် ခြောက်သွေ့သော မြေမျက်နှာပြင်ကို ထုတ်ပေးပြီး ပေါင်းပင်ပေါက်ခြင်းကို လျှော့ချပေးသည်
ဆိုးရွားသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုမရှိဘဲ ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်ရေကို အသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။အချို့သော သီးနှံများ၏ အပေါ်ယံရေသွင်းခြင်းကို တားမြစ်ထားသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာပါ။
Short Term SDI
စနစ်သက်တမ်းမှာ ၃ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် တန်ဖိုးအလယ်အလတ်ရှိသော သီးနှံများအတွက် အသုံးပြုသည်။
Drip tubing ကို မျက်နှာပြင် ၃ လက်မနှင့် ၁၀ လက်မကြားတွင် တပ်ဆင်လေ့ရှိသည်။
သီးနှံများ၏ အမြင့်မားဆုံး ET လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
စနစ်သက်တမ်း 20+ နှစ်။
အများအားဖြင့် ကုန်စည် သီးနှံများ အတွက် အသုံးပြုကြသည်။
Drip tubing ကို မျက်နှာပြင် ၁၂ လက်မနှင့် ၁၈ လက်မကြားတွင် တပ်ဆင်လေ့ရှိသည်။
အမြင့်ဆုံးသီးနှံလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် မြေဆီလွှာထိန်းနိုင်စွမ်းနှင့် ဆည်ရေသွင်းချိန်ကို အသုံးချရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
လိုအပ်သောဖိအားများနှင့်အညီ system ကိုလည်ပတ်ကြောင်းသေချာပါစေ။အထွတ်အထိပ် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စနစ်၏ အမြင့်ဆုံးသက်တမ်းကို သေချာစေရန် စနစ်ဖိအားများနှင့် စီးဆင်းမှုများကို စောင့်ကြည့်ရန် လိုအပ်သည်။
filtration စွမ်းဆောင်ရည်ကို စောင့်ကြည့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
Filtration လိုအပ်ချက်များသည် ရေအရည်အသွေး၊ dripper သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အခြားအချက်များနှင့် ကွဲပြားသည်။ဇကာများအတွက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်ချက်များ (ဖန်သားပြင်၊ ဒစ်ခ်၊ မီဒီယာ စသည်) နှင့် ရေအရည်အသွေးပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။
အက်ဆစ်ဆေးထိုးခြင်းသည် ဓာတုညစ်ညမ်းမှုများကြောင့် မိုးရွာသွန်းမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်သည်။အက်ဆစ်ဆေးကြောခြင်း (shock treatment) သည် အစက်အပြောက်များအတွင်း ညစ်ညမ်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်မှုကို လျှော့ချပေးနိုင်သည်။
ကလိုရင်းဆေးထိုးခြင်းသည် ရေညှိ၊ ဘက်တီးရီးယားနှင့် အကျိအချွဲများကဲ့သို့သော ဇီဝဆိုင်ရာ/အော်ဂဲနစ်ညစ်ညမ်းမှုကြီးထွားမှုကို ကန့်သတ်ထားသည်။
ကလိုရင်းသည် သံနှင့် မန်းဂနိစ်ကို ရေနှင့် ခွဲထုတ်နိုင်သော မပျော်ဝင်နိုင်သော ဆားများအဖြစ် ဓာတ်တိုးစေပြီး ဆာလဖာဘက်တီးရီးယားများကို လျှော့ချပေးသည်။
ပိုးမွှားစီမံခန့်ခွဲမှုသည် ရာသီတစ်လျှောက်လုံးတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
SDI System ကိုမရွေးချယ်ခင် ဘာတွေစဉ်းစားသင့်လဲ။
နယ်ပယ်အခြေအနေများ- မြေအမျိုးအစား၊ အပေါ်ယံမြေဆီလွှာ၊ မြေအောက်အမျိုးအစား၊ လျှောစောက်နှင့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင်
ရေ- ရရှိနိုင်မှု၊ အရေအတွက်နှင့် အရည်အသွေး (ရေအရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုကို လုပ်ဆောင်ရန် အရေးကြီးသည်)
ကောက်ပဲသီးနှံ- အမျိုးအစား၊ လိုအပ်ချက်များနှင့် အလှည့်
ယဉ်ကျေးမှုအလေ့အကျင့်- မျိုးစေ့ချခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ရိတ်သိမ်းခြင်း။
Drip line ထုတ်ကုန်များ- အချင်း၊ နံရံအထူ၊ ထုတ်လွှတ်မှုအကွာအဝေး၊ စီးဆင်းမှုနှုန်းနှင့် စစ်ထုတ်မှုလိုအပ်ချက်များ
drip လိုင်းများ၏တည်နေရာ- အတိမ်အနက်၊ ဘေးနှစ်ဖက်ကြားအကွာအဝေးနှင့် သီးနှံနှင့်ဆက်စပ်မှု
စနစ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် တည်နေရာ- ပန့်များ၊ စစ်ထုတ်မှုများ၊ ထိန်းချုပ်မှုများ၊ ထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင်များ၊ လိုင်းများ (ပင်မလိုင်းများ၊ ပင်မလိုင်းခွဲများ၊ နှင့် manifolds)၊ လေကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင်များနှင့် drip လိုင်းများ
စောင့်ကြည့်ရေး- အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စနစ်၏သက်တမ်းကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန် သေချာစေရန် စနစ်စီးဆင်းမှုနှုန်းနှင့် ဖိအားများကို စောင့်ကြည့်ရပါမည်။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ- စနစ်သက်တမ်းကြာရှည်ပြီး အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်ပါသည်။
dripper ၏အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံသည် elastic diaphragm ကိုအသုံးပြုပြီးဖိအားနှင့်ထိန်းချုပ်မှုစီးဆင်းမှုကိုထိန်းညှိရန်၊
ပုံသွင်းထားသော ဆီလီကွန်အမြှေးပါးကို ထိုးသွင်းခြင်းဖြင့် သက်တမ်းကို ထိရောက်စွာ ရှည်စေပါသည်။
အထူးဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသော စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းသည် ကိုယ်တိုင်သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပိတ်ဆို့ခြင်းဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်းကို ထိထိရောက်ရောက် မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်၊
UV ဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများသည် ရာသီဥတုအခြေအနေအမျိုးမျိုးအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
လျော်ကြေးပေးသော ဖိအားအကွာအဝေးအတွင်း တူညီသော၊ တိကျပြီး တသမတ်တည်းရှိသော ဆည်မြောင်းကို သေချာပါစေ။
မြေကြီးပေါ်တွင် ထားနိုင်သည် သို့မဟုတ် မြှုပ်နှံနိုင်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသော flowrate မှရွေးချယ်နိုင်သည်;
ကွဲပြားသော မြေမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့် ဆည်မြောင်း၏ ကုန်းစောင်းများတွင် သင့်လျော်သည်။
သင့်လျော်သော နယ်ပယ်-တောင်ပေါ်ဒေသရှိ အတန်းလိုက်သီးနှံများ သို့မဟုတ် အကွာအဝေး၊ ဥယျာဉ်ခြံများ၊ စပျစ်ခြံများနှင့် လေကာအင်္ကျီများအတွက် သင့်လျော်သည်။
20 ၀.၁၈ ၀.၂၀.၃ ၀.၄၀.၅ ၀.၆0.8 1.0 1.1 1.2
Inlet ပေါ် မူတည်
မှတ်ချက်- Emitters Spacing သည် 100mm-2000mm မှ ရွေးချယ်နိုင်သည်။
Pressure-Compensated Driplines Performance Index:
အမြင့်ဆုံး Working pressure 1.5ဆ။မချိုးရ၊ ယိုစိမ့်မှုမရှိ
Burst Pressure ၊
Q—Flowrate (L/h) P—Inlet Pressure (kpa)
Tube typeု, Ma
Dispersion : Dispersion အဆင့် ≤3အဆင့်
နောက်တစ်ခု: အလယ်ဗဟိုမဏ္ဍိုင်ဖြန်းစက် ဆည်မြောင်းစက်
အတွင်းပိုင်း inlay drip ရေသွင်းပိုက် (Double hole)
single wing labyrinth drip ဆည်မြောင်းတိပ်
အတွင်းပိုင်း inlay drip ရေသွင်းတိပ်